2009 ~ सन्ध्याकालिन अभिभादन
पढ़ाई मा कत्रो दिल चस्पी नेपाली हजूर बाबाको ५५ वर्षमा खुला विद्यालय हुँदै क्याम्पस
दमक, २०६६ कार्तिक १६ - ५५ बर्षीय दयाराम धिमालको दैनिकी बदलिएको छ । सधैका वर्षमा यो समयमा उनी बिहानैदेखि या धान काट्न खेतमा हुन्थे वा कसैकोमा झ्यालढोका बनाउँदै । यस वर्षका उनका बिहानी भने कापी- किताब बोकर क्याम्पस जानमा बित्ने गरेका छन् ।
यो बुढ्यौलीमा क्याम्पस पुर्‍याउन उनलाई खुला शिक्षा कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो । ३८ वर्षअघि विद्यालय छोडेका धिमाल डेढ वर्षदेखि नियमित विद्यार्थी बनेर तन्नेरी जोवनमा फर्किएका छन् ।
आफूले आठ कक्षा छोडेर वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएर जन्मिएका छोरो- छारीले पनि क्याम्पसका प्रारम्भिक कक्षा सकिसके । 'उस बेला पढ्न सकिएन, पछि पढ्न पाइएको थिएन,' हिमालय उच्च मावि, दमकको कक्षा ११ मा भेटिएका धिमालले भने, 'पछि खुला विद्यालय आएपछि पढ्ने धोको पूरा भयो ।'
धिमाल बिहान सवा छ बजेदेखि कक्षामा आउँछन् र करिब १० बजेसम्म पढ्नमै व्यस्त् हुन्छन् । त्यसपछि मात्र उनको सधैको दैनिकी सुरु हुन्छ । यस वर्षको एसएलसीमा सहभागी भएर सफल भएपछि उनको उच्च शिक्षाको बाटो खुलेको हो । नेपाली, समाजसास्त्र र जनसंख्या विषय लिएर पढिरहेका धिमाल आफ्नो पढाइ केवल समाजसेवाका लागि भएको बताउँछन् । 'पढेर जागिर खाउँला भन्ने होइन,' उनी भन्छन्, 'समाजसेवाका लागि पनि शैक्षिक योग्यता जरुरी रहेछ ।'
आठ कक्षा सकेर विद्यालय छाडेपछि उनी तत्कालीन नगर पञ्चायतको नगरसभासद पनि भएका थिए । १२ कक्षा सकियो भने त्यसभन्दा रामै्र स्थानमा पुगेर समाजसेवा गर्न सकिएला भन्ने आशा छ उनमा । आफूसँगै पढेका दौंतरी सरकारी नोकरी तथा अन्य उच्च स्थानमा पुगेर सफलता हासिल गरेको देखेपछि खिन्न भइरहेको बेला एसएलसी पास गर्ने मेसो पाएपछि पढ्न आएको उनले बताए । गत वर्ष खुला कक्षामा आउँदा विद्यालयको पोसाक लगाउनुपर्दैनथ्यो तर औपचारिक कक्षामा आउन थालेपछि त विद्यालयले तोकेको पोसाक लगाउनुपर्छ । दैनिक पोसाकमा टाइ पनि राखिएकाले उनलाई टाइ बाँध्ने समस्या बिहानैपिच्छे आउने गर्छ । टाइ यसै विद्यालयबाट १२ कक्षा सकेकी छोरी नेत्रकुमारीले लगाइदिन्छिन् ।
आठ कक्षामात्र पढे पनि धिमालले आफ्नो भाषा र संस्कृति जोगाउन योगदान दिएका छन् । उनले दुई वर्षअघि धिमाल जातिको लिपि धमलिपि निर्माण गरेको धिमाल युवा मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष अजित धिमालले जानकारी दिए । सो लिपिलाई नै आधिकारिकता प्रदान गर्न उनले धिमाल जातीय विकास केन्द्रमा पेस गरेका छन् । उनको लिपिमाथि बहस र परिमार्जन भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
पढाइ छोडेर घर व्यवहार र मजदूरीतिर बरालिएको धिमालको जिन्दगी कोल्टे फेराउने कामचाहिं शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको खुला विद्यालयले गरेको हो । प्रधानाअध्यपक बिदुर खतिवडाका अनुसार शिक्षा कार्यालयाले गत वर्ष पहिलोपटक हिउँ माविमा खुला विद्यालय सञ्चालन गरेको हो ।
लेखक :- Hari Shrestha at Monday, November 02, 2009
सन्दर्भ :- खबरका कुरा, देशका कुरा, लघु कथा
दोहा (कतार) , २०६६ कार्तिक ७ - पहिलो पटक जहाज चढेर विदेश हिड्न लागेका म्याग्दी, लुलाङ्ग- ८, रनु बिक काठमाडौं गांेगबुबाट ट्याक्सी चढेर त्रिभुवन विमानस्थल आउँदै थिए । उनीसंग पासपोर्ट, टीकट र अन्य कागजपत्र थिएन ।
रनुलाई ट्याक्सीमा विमानस्थलतर्फ बागलुङ, बुङ्गादोभानका भूमीराम मगरले ल्याउदै थिए । हो, त्यती बेला भुमीले पासपोर्ट, टीकट र अरु काजगात रनुको हातमा थमाउँदै भने-'अबदेखि तिम्रो नाम जीतबहादुर कामी भयो, जसले सोधे पनि त्यही भन्नु ।'
विमानस्थल नपुग्दै ३० वषर्ीय रनुको बाटैमा न्वारन भयो । त्यतीमात्र होइन रनुको स्थायी ठेगाना र उमेर पनि सबै बदिलियो । 'घर कहाँ भनेर सोधे भने खुङ्खानी- ५, बागलुङ भन्नु' भुमीले बाटोमा रनुलाई प्रशिक्षण दिदै भने-'कसैले पहिला कहाँ गएर आएका थियौ भनेर सोधे भने मलेसिया भन्नु ।'
निरक्षर रनु अवाक हुँदै द्धुविधामा परे-के गर्ने नगर्ने ? 'ढुक्क भएर जाऊ केही समस्या परे हामी छौं' भूमीका शब्दले रनुलाई अलि केही आस्वस्त पार्‍यो र पासपोर्ट, टीकट बोकेर विमानस्थल छिरे ।
'मलेसिया गएर आएको हो?' विमानस्थलका कर्मचारीले न भन्दै त्यही प्रश्न गरे । 'हो, गएर आएको हँु' रनुले जवाफ दिए । त्यसपछि रनु दुवई ट्रान्जिट हँदै दोहा विमानस्थल आए, जहाँ उनलाई अर्जन पुरी लिन आउँछन् भनिएको थियो तर आएनन् । उनी आउने थाहपाएर बसेका आफन्त अम्मर रसाईली र तिलक श्रीपालीले विमानस्थल गएर ल्याए ।
'विदेश त आएँ, तर यहाँ न काम पाइयो, न कंपनी नै भेटियो' कतारस्थित नेपाली दुतावासमा आएको हप्ता दिन नवित्दै स्वदेश फर्किन भनेर पुगेका रनुले भने-'पासपोर्टदेखि सबै नक्कली भएपछि समस्या पर्‍यो ।' नक्कली काजगातको कारण कानुनी समस्या पर्ने भएपछि उनी आफन्त र दुतावासको सहयोगमा स्वदेश जाने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
रनुका अनुसार उनले आफ्नो पासपोर्ट बागलुङका कर्ण छन्त्याल मार्फत भुमीलाई दिएका थिए । उनीहरुले रनुको फोटोमात्र प्रयोग गरेर जीतबहादुर कामी -जो पहिल्यै मलेसिया गएर फर्केका थिए)को पासपोर्टमा फोटो परिपर्वन गरेर दिएका रहेछन् ।
सन्दर्भ :- परदेशका कुरा, लघु कथा
what is the love? some word about love..........
Love is broad; if you love someone, you love all things, not just their beauty. Love is narrow; you love one and only one, compared to them, no one matters........and The beginning of love is to let those we love be perfectly themselves, and not to twist them to fit our own image. Otherwise we love only the reflection of ourselves we find in them. love is great nobody can alive without love................ hari shrestha.
लेखक :- Hari Shrestha at Monday, August 31, 2009
सन्दर्भ :- विवध प्रंसग
ऑनलाइनमा सगरमाथा TV हर्नुहोस
लेखक :- Hari Shrestha at Sunday, May 31, 2009
सन्दर्भ :- मनोरञ्जन, विवध प्रंसग
केहीछिन हसौ न त !
लेखक :- Hari Shrestha at Saturday, May 30, 2009
लेखक :- Hari Shrestha at Friday, May 29, 2009
न बिर्सें तिमीलाई न पाएँ तिमीलाई
न बिर्सें तिमीलाई न पाएँ तिमीलाईविना अर्थ दिलमा सजायँ तिमीलाईयो यात्रा सुनौलो अनि साथ तिम्रोसम्झेर भेट्न बोलाएँ तिमीलाईआयौ समिपै जब तिमी निदरीमायो हलचल, यो धड्कन सुनाएँ तिमीलाईरमाएँ एकैछिन, पछि आँशु झऱ्योअनि आँशु पुछ्दै पठाएँ तिमीलाईभयो आश रित्तो र यो मन निराश भोअनि बेहोसी मै कराएँ तिमीलाईअनायासै मेरो दुख्यो जिन्दगीमापरेली भिजाइ बगाएँ तिमीलाई .... (अंजू पन्त)
म र मेरो पल
लेखक :- Hari Shrestha at Monday, May 25, 2009
सन्दर्भ :- फोटो ग्यालरी
पढ़ाई मा कत्रो दिल चस्पी नेपाली हजूर बाबाको ५५ वर...